मधेसमा अनेरास्ववियुका चुनौती | Madhesi - United We Stand
मधेसमा अनेरास्ववियुका चुनौती
September 21, 2006 at 10:12 pm Leaveacomment
असोज १ देखि ६ सम्म अनेरास्ववियुको १८ औं राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा हुँदै छ । अध्यक्ष्ा खिमलाल भट्टराईले अखिललाई मधेसी विद्यार्थीमाझ कसरी फैलाउने र आस्था तथा भरोसाको केन्द्र बनाउने सुझाव माग्नुभयो । सिंगो मुलुक आमूल परिवर्तनको सँघारमा उभिएका बेला विद्यार्थी सम्मेलनले ऐतिहासिक फड्को मार्ने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । अखिल देशव्यापी संगठन हो । यो अनेक किसिमका उकाली- ओराली, सफलता-कमजोरी, चुनौती र अवसर छिचोल्दै अनुभवको कसौटीमा तिखारिएको छ । अखिल अगाडि अवसरको पहाड छ भने चुनौतीको समुद्र पनि छ, जोे शास्त्रीय चिन्तन र व्यवहारले सम्पन्न गर्न सकिँदैन । नवीनता र श्रृजनात्मकता अपरिहार्य छ । यस्तो स्थितिमा मधेसी विद्यार्थीबीच अनेरास्ववियुलाई लोकपि्रय बनाउन, प्रभाव तथा संगठन विस्तार गर्न निम्न विषयमाथि ध्यान दिनुपर्छ–१) मधेसी समुदायको चाहना स्वीकार- मधेसी समुदाय सचेत र सशक्त नेपाली नागरिकका रूपमा राज्यको मान्यता चाहन्छ । राज्य सञ्चालन, नीति निर्माण र शक्ति अभ्यास गरिने ठाउँमा समावेशी- समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहन्छ । आत्मनिर्णय र स्वशासनको अधिकार चाहन्छ । संघीय राज्यव्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहन्छ । आफ्नो भाषा र संस्कृतिको मान्यता, नागरिकता समस्याको समाधान चाहन्छ । तसर्थ अखिलले मधेसी विद्यार्थीबीच आफ्नो संगठनलाई लोकपि्रय बनाउनेे हो भने मधेसी समुदायका आवाजलाई नीतिगत र वैचारिक रूपमा संगठनभित्र समावेश गर्नुपर्छ र त्यसको पारदर्शी थालनी १८ औं सम्मेलनबाटै सुरु हुनुपर्छ ।
-२) दैनिक समस्यासँग एकाकार- मधेसी विद्यार्थी महिला हुन् वा पुरुष विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका शिक्षण संस्था र सार्वजनिक जीवनमा अनेकानेक समस्या बेहोरिरहेछन् । शिक्षण संस्थामा भर्ना, कक्षा कोठामा, माक्र्स-मूल्यांकनमा, क्यान्टिन वा क्याफ्टेरियामा, होस्टल इत्यादि सन्दर्भमा मधेसी विद्यार्थीले विभेदकारी व्यवहार बेहोरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै सार्वजनिक यातायात उपभोग गरिराख्दा, सार्वजनिक स्थलमा जाँदा-आउँदा विभिन्न अपमानपूर्ण व्यवहार भोगिरहेका हुन्छन् । क्याम्पसहरूमा गुन्डा र आवारा केटाबाट आक्रमण र छेडछाडको सिकार भइरहेका हुन्छन् । यस्त्ाो स्थितिमा मधेसी विद्यार्थी सहयोग, समर्थन र साथको अपेक्षा गर्छ । अनेरास्ववियु मधेसी विद्यार्थीको रक्षकका रूपमा खडा हुनुपर्छ । मधेसी विद्यार्थीका लागि वा भनांै उत्पीडितका लागि माक्र्सवाद, समाजवाद सबै त्यहीँनेर खडा हुन्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा जुन संगठनसाथ खडा हुन्छ, मधेसी विद्यार्थीले त्यसैलाई रोज्छ । यस्त्ाो व्यावहारिक, अत्यन्त संवेदनशील र भावनात्मक घडीमा मधेसी विद्यार्थीले साथ पाउनुपर्छ ।
-३) संगठनात्मक प्रतिनिधित्व दिने- मधेसी विद्यार्थी अहिले निकै जागरुक, सचेत, जुझारु र आक्रामक मुडमा देखिन्छन् । अधिकारको लागि छट्पटाहट छ । अनेरास्ववियुप्रति मधेसी विद्यार्थीको मूल आक्रोश अखिलमा मधेसीको प्रतिनिधित्व न्यून वा प्रायः शून्य भयो, केहीलाई प्रतिनिधित्व दिइए पनि झारा टार्ने र न्यून महत्त्वको ठाउँ दिइन्छ भन्ने छ । यो गुनासो धेरै हदसम्म जायज देखिन्छ । केन्द्रीय सचिवालय, केन्द्रीय कमिटीमा, राष्ट्रिय परिषद् र विशेष गरी केन्द्रीय पदाधिकारीमा मधेसी विद्यार्थीलाई स्थान दिनुपर्छ । यो प्रतिनिधित्व समावेशी-समानुपातिक र सम्मानजनक साझेदारीको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । यसको सुरुवात १८ औं सम्मेलनबाटै गर्नुपर्छ ।
-४) व्यवहारमा परिवर्तन- यतिखेर मधेसी विद्यार्थीले आपसमा सम्मानजनक-साझेदारीको सिद्धान्तलाई मूलमन्त्रको रूपमा अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ । समाजमा सम्मानजनक र समान व्यवहारको अपेक्ष्ाा राखेजस्तै विद्यार्थी-विद्यार्थीबीच पनि सम्मानजनक साझेदारी अगाडि बढाउन चाहन्छन् । मधेसी विद्यार्थीको गुनासो के छ भने उनीहरूलाई दुई नम्बर दर्जाको रूपमा व्यवहार गरिन्छ । यस्तो हो भने यसलाई अविलम्ब हटाउनुपर्छ । कीर्तिपुर, त्रिचन्द्र, पोखरा क्याम्पसको सन्दर्भमा वा अन्य धेरै सन्दर्भमा अनेरास्ववियु आबद्ध मधेसी विद्यार्थीको गुनासो र आक्रोश के छ भने यिनीहरूलाई नेविसंघ वा अन्य कुनै संगठनका विद्यार्थीबाट भौतिक आक्रमण भए पनि अखिलकै साथीबाट जुन साथ र सहयोग हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । अखिलको सदस्य हो भने त्यो पहाडको होस् कि मधेसको, पुरुष होस् कि महिला संगठनको नीति र धर्मअनुसार सबैले समान व्यवहार पाउनुपर्छ । यो नीति औपचारिक रूपमा अनेरास्ववियुले पारित गरी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।
-५) विगतको व्यवहार बदल्नुपर्छ- काठमाडौं उपत्यकाका मधेसी विद्यार्थी, जो अनेरास्ववियुमा अत्यन्त क्रियाशील रहेर विभिन्न क्याम्पसमा नेतृत्व प्रदान गरी रहेका छन्, तिनीहरूको भेला र अन्तर्त्रिmयाले केही वास्तविकता उजागर गरेको छ । भेलामा महासचिव माधव नेपाललगायत अन्य पार्टी तथा अखिल नेता उपस्थित थिए । त्यहाँ मधेसी विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेको चित्र अत्यन्त गम्भीर र विचारणीय थियो । त्यसको एउटा निचोड थियो- अनेरास्ववियुमा लागेका मधेसी विद्यार्थी नेताले स्ववियु निर्वाचनमा संगठनभित्र उचित स्थान पाएनन् । जसले उम्मेदवारी पाए तिनीहरूलाई उचित पद दिइएन र केही न्यून सिट पाउन पनि निकै संघर्ष र द्वन्द्व गर्नु पर्‍यो । अब यो स्थिति कायम रहन दिनुहुँदैन । मधेसी विद्यार्थीलाई स्ववियु चुनावमा योग्यता र क्षमता अनुसार उचित र उपयुक्त स्थान दिनुपर्छ । विगतका व्यवहार बदलेर नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्छ । अनेरास्ववियुले सांगठनिक निर्णय लिँदा जातीय, सामुदायिक, क्षेत्रीय वा लैंगिक रूपमा कहिलेकाहीँ अत्यन्त नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
-६) मधेसी विद्यार्थी संयन्त्र व्यवस्थित गर्ने- अनेरास्ववियुभित्र केही महिनादेखि औपचारिक रूपमै मधेसी विद्यार्थी केन्द्रीय सम्पर्क कमिटी क्रियाशील देखिन्छ । जसले मधेसी विद्यार्थीबीच अखिलको प्रभाव र संगठन विस्तार निम्ति काम गरिरहेकै छ । एमालेले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एउटा लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनको नाममा सामुदायिक संगठन खडा गर्ने औपचारिक निर्णय भर्खरै गरेको छ । यो अनेरास्ववियुको लागि खुसीको कुरा हुनुपर्छ । अनेरास्ववियुभित्र खडा गरिएको मधेसी विद्यार्थी संयन्त्रलाई विचारमा व्यवस्थित, नीतिमा स्पष्ट, अधिकारक्षेत्रको हिसाबले स्पष्ट परिभाषित र एउटा अत्यन्त क्रियाशील संगठनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । संगठनलाई १८औं सम्मेलनबाट अधिकार सम्पन्न र अनेरास्ववियुको सिस्टर अंगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । त्यसको रूप र संरचना कस्तो हुनुपर्छ यसबारे संगठनभित्र र एमालेमा समेत व्यापक र गहिरो बहस, छलफल हुँदा राम्रै हुन्छ । त्यो संगठनलाई मधेसी विद्यार्थीबीच स्थापित र लोकपि्रय बनाउन सकियो भने अनेरास्ववियुलाई त्यसले धेरै ठूलो मद्दत र सहयोग हुनेछ ।
-७) महासंघको रूपमा अघि बढाउने- देशमा विभिन्न किसिमको राजनीतिक बहस जारी छ । नेपाल अब ढिलोचाँडो संघीय राज्य संरचनामा जाने निश्चित छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अनेरास्ववियुलाई एउटा एकात्मक संरचना, जो अहिलेसम्म चल्दै आएको छ यही रूपमा निरन्तर अघि बढाइराख्ने कि यसलाई संघीयताको परिप्रेक्ष्यमा महासंघको संरचनामा लैजाने ? यो एउटा अत्यन्त वैचारिक, राजनीतिक प्रश्न उभिएको छ । मुलुकभित्र समावेशी-समानुपातिक लोकतन्त्रको कुरा चलिरहँदा के अनेरास्ववियु यसबाट अलग रहन सक्छ वा अलग राख्नु उपयुक्त हुन्छ ? द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले भन्छ- ‘जब उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादक शक्तिबीच अन्तर्विरोध सिर्जना हुन्छ तब परिस्थितिले परिवर्तन -क्रान्ति) खोज्छ ।’
सिंगो सामाजिक संरचना र राजनीतिक परिपाटीले रूप र सार फेर्ने तर राजनीतिक संगठन पुरानो संरचनामा रहन असम्भव छ ? अन्तर्विरोध पैदा हुँदैन ? माक्र्सवादले त पैदा हुन्छ भन्छ । तसर्थ आगतका लागि अनेरास्ववियुजस्तो प्रगतिशील, क्रान्तिकारी संगठनभित्र अहिलेदेखि गम्भीर र व्यापक बहस हुनुपर्छ । यसको प्रस्थान बिन्दु १८ औं राष्ट्रियसम्मेलन हुन सक्नुपर्छ । विचारमाथि बहस चलाउन र नवीन विचार उत्पादन तथा स्थापित गर्न इतिहास बोकेको संगठनले खुट्टा कमाउनुहुँदैन ।
Posted on: 2006-09-12 21:02:38
Case Study – Haat Colors	पहाडियामा शासकीय र मधेशीहरुमा दास मनोवृत्ति छ: मात्रृका यादव